Ukubambisana komphakathi kuyanqoba – The Ulwazi Programme
Ukubambisana komphakathi kuyanqoba
Uthuthuva oluqale sengathi umbhikisho wabalandeli bowayengumongameli wezwe uJacob Zuma abafuna akhishwe ejele luholele komkhulu umonakalo esifundazwe saKwaZulu Natal kanye naseGoli.
Ukuhlaselwa nokuntshontshwa kwempahla ezitolo ezahlukene kuqale esifundazweni saKwaZulu Natal kwaze kwafinyelela naseGoli. Lokhu kuhlasela kugcine kubukeka njengesimo esibhebhethekiswe osomathuma kanye nezigebengu abezifuna ukucekela phansi umnotho wezwe. Ziningi izindawo ezithintekile nezicekelwe phansi ngokuntshontsha, ukubulawa kanye nokushiswa kwempahla. Amaphoyisa abengakwazi ukuzinqanda lesi simo ngenxa yokuthi abantu bebengangoZulu eya empini.
Ukusukuma komphakathi obungahambisani nalesi senzo kube nomthelela omuhle ekunqandeni loluthuthuva. Lapha eThekwini kuqale ukubonakala kwamalunga omphakathi obugade ixhaxhathela yezitolo iGalleria eManzimtoti ukuthi ingahlaselwa. Ezinye izindawo ezinjengo Kloof, Durban North, nezinye nazo zishaye phansi ngonyawo zathi azihambisani nalesi senzo sokuntshontsha.
Amalunga emiphakathi ehlukene ebivikela izitolo nokuntshontshwa abesho ukuthi angeke avume kucekele phansi amadolobha noma izindawo zabo okuzogcina kulimaza bona futhi njengomphakathi.
Ukubambisana komphathi akwenzekanga ezindaweni ezakhelene neTheku kuphela kepha nezinye izindawo njengeNquthu nakhona bakwazi ukuvikela idolobha ukuba lingahlaselwa. EGoli izindawo eziningi umphakathi kanye namaphoyisa ukwazile ukuvikela ngempumelelo.
Lokhu kuveza ngokusobala ukuthi ukusebenzisa ngobumbano kunamandla noma isimo sisibi kangakanani. Amaphoyisa abehluleka ukunqanda abantu abebezitampela kepha kuthe uma kusukuma umphakathi kwabonakala umehluko.
This article looks at the positive results of communities that came together to stopped and prevented looting in certain parts of KwaZulu and Gauteng. When police could not do anything to prevent looters when they showed up in numbers, community member stood together and were able to stop looting and different parts of these provinces.
Categories History, News, Places Tags umphakathi